ဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏လူတို့မျက်မှောက်၌ဖြောင့်မတ် Are? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဘယ်လိုငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်? ဒါဟာခရစ်တော်အပြစ်ရှိသောသူခဲ့သည့်အတွက်တူညီတဲ့လေးစားမှုအတွက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည်. သူတစ်ဦးထုံးစံ၌ကြှနျုပျတို့၏နရောယူဆများအတွက်, ငါတို့အခန်းတစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်အံ့သောငှါ, နှင့်အပြစ်ရှိသောသူကဲ့သို့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါ, မသူ့ကိုယ်ပိုင်ပြစ်မှုများများအတွက်, ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေရဲ့သူတို့အဘို့, သူစင်ကြယ်သောအမှားကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသကဲ့သို့လြောကျ, ငါတို့ကိုကြောင့်ဖြစ်ဘူးသောအပွစျဒဏျကိုသည်းခံစေခြင်းငှါ,- မကိုယ်တော်တိုင်မှ. ဒါဟာတူညီတဲ့ထုံးစံ၌ဖြစ်ပါသည်, ဆက်ဆက်, ငါတို့သည်သူ့ကိုအတွက်ယခုဖြောင့်မတ်ဖြစ်ကြောင်းကို- မကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏တရားမျှတမှု, ငါတို့၏က rendering စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း, ငါတို့မူကားခရစ်တော်ရဲ့တရားသဖြင့်ဆက်သွယ်မှု၌စီရင်သောကြောင့်,, သောငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပေါ်ထားကြပြီ, ဒါကြောင့်ငါတို့ဖြစ်လာစေခြင်းငှါ,.
ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီဖတ်ရန်နှင့်အထဲတွင်နစ်မြုပ်ကုန်အံ့! အပျေါမှာငါ့ message ကိုပြင်ဆင်နေစဉ်ငါသည်ဤကိုးကားအမှတ်မထင်2ကောရိန္သု 5:18-21 ထိုကျောင်းပရဝုဏ်ကွင်းဆင်းအမျိုးသားညီလာခံများအတွက်. ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယ
မာရိသညျ Gayle • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသုံးပြီးပါသလား “လွတ်လပ်သော,” အပြစ်တရားမှစုသက်ဆိုင်သော, (အများဆုံးအဘိဓါနျကနေ’ အဓိပ္ပါယ်များ) ယရှေုသညျသောအသှငျအပွငျပေး “ကင်းလွတ်ခွင့်ခဲ့သည်” အပြစ်တရား၏လက်မှ (ဆိုလိုသည်မှာ. ငါတို့အဖြစ်ကျနော်တို့ကလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ / ဖွစျလိမျ့မညျ) … သူကလိုလိုလားလားညျပွစျမှားဘယ်တော့မှကြောင်းနှိုင်းယှဉ်, သူ့အလိုတော်တစ်ခုလုပ်ရပ်အားဖြင့်၎င်း, ကျွန်တော်တို့ကိုခစျြ၏ထွက်? ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုထင်တယ်, သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကနေယူ. (သူကအပြစ်တရား၏လက်မှကင်းလွတ်ခွင့်ခံရဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး, ကြှနျုပျတို့ပွုအဖြစ်။)